Mashoko Akanaka Akanyorwa naRuka 8:1-56
Vakadzi vaifamba naJesu (1-3)
Mufananidzo wemudyari (4-8)
Chaiita kuti Jesu ashandise mifananidzo (9, 10)
Mufananidzo wemudyari unotsanangurwa (11-15)
Rambi harifaniri kufukidzwa (16-18)
Amai vaJesu nevanin’ina vake (19-21)
Jesu anodzikamisa dutu (22-25)
Jesu anodzingira madhimoni munguruve (26-39)
Mwanasikana waJairosi; mukadzi anobata nguo yaJesu yekunze (40-56)
8 Achingobva ipapo, akatanga kufamba nemaguta ese uye nemisha yese achiparidza nekuzivisa mashoko akanaka eUmambo hwaMwari.+ Uye aiva nevane Gumi Nevaviri, 2 nevamwe vakadzi vakanga vaporeswa pamweya yakaipa uye pazvirwere vanoti: Mariya ainzi Magadharini, akanga abuda madhimoni manomwe; 3 Joana+ mudzimai waKuza, mutariri weimba yaHerodhi; Suzana; nevamwe vakadzi vakawanda, vaivashumira vachishandisa zvinhu zvavo.+ 4 Vanhu vakawanda pavakanga vaungana pamwe chete nevaya vaaifamba navo mumaguta, akataura achishandisa mufananidzo, achiti:+ 5 “Mudyari akaenda kunodyara mbeu yake. Paaikusha mbeu, imwe mbeu yakawira parutivi pemugwagwa, ikatsikwa-tsikwa, shiri dzekudenga dzikaidya yese.+ 6 Imwe yakawira pamatombo, uye payakamera, yakaoma nekuti pakanga pasina unyoro.+ 7 Imwe yakawira muminzwa, ikavhungwa neminzwa yaikura pamwe chete nayo.+ 8 Asi imwe yakawira paivhu rakanaka, uye payakamera yakabereka zvakapetwa ka100.”+ Paaitaura zvinhu izvi, akabva ashevedzera achiti: “Ane nzeve dzekunzwa, ngaanzwe.”+ 9 Asi vadzidzi vake vakamubvunza kuti mufananidzo uyu wairevei.+ 10 Iye akati: “Imi makapiwa kunzwisisa zvakavanzika zvitsvene* zveUmambo hwaMwari, asi vamwe vese vanozvipiwa nemifananidzo,+ kuitira kuti kunyange vachitarisa, vanotarisa pasina, uye kunyange vachinzwa, havabati zviri kutaurwa.+ 11 Izvi ndizvo zvinorehwa nemufananidzo wacho: Mbeu ishoko raMwari.+ 12 Iya iri parutivi pemugwagwa ndevaya vanenge vanzwa, uye Dhiyabhorosi anouya obvisa shoko mumwoyo mavo kuti varege kutenda votadza kuponeswa.+ 13 Iya iri pamatombo ndevaya vanoti kana vanzwa shoko, vanorigamuchira nemufaro, asi havana midzi. Vanongotenda kwenguva pfupi, asi panguva yekuedzwa, vanobva vawa.+ 14 Kana iri iya yakawira muminzwa, ndevaya vakanzwa, asi kutsauswa kwavanoitwa nekuzvidya mwoyo, nepfuma,+ nemafaro eupenyu huno,+ kunoita kuti vavhungwe zvachose, uye zvibereko zvavo hazvisviki pakuibva.+ 15 Kana iri iya yepaivhu rakanaka, ndevaya vanoti pavanenge vanzwa shoko nemwoyo wakarurama uye wakanaka,+ vanorichengeta, vobereka zvibereko vachitsungirira.+ 16 “Hapana munhu anoti kana abatidza rambi, orifukidza nemudziyo kana kuriisa pasi pemubhedha, asi kuti anoriisa pachigadziko cherambi, kuti vaya vanopinda vavhenekerwe.+ 17 Nekuti hapana chinhu chakavigwa chisingazobudi pachena, kana kuti chinhu chakavanzwa zvachose chisingafi chakazivikanwa uye chisingabudi pachena.+ 18 Saka nyatsongwarirai kuti munoteerera sei, nekuti munhu wese anazvo,+ achawedzerwa zvimwe, asi wese asina, achatorerwa kunyange zvaanofunga kuti anazvo.”+ 19 Amai vake nevanin’ina vake vakauya,+ asi vakatadza kusvika paaiva nekuti vanhu vakanga vakawanda.+ 20 Saka akaudzwa kuti: “Amai vako nevanin’ina vako vakamira panze; vari kuda kukuona.” 21 Akavapindura kuti: “Amai vangu nevanin’ina vangu ndeava vanonzwa shoko raMwari voita zvarinotaura.”+ 22 Rimwe zuva akakwira chikepe nevadzidzi vake, akavati: “Ngatiyambukei mhiri kwegungwa.” Saka vakasimuka vakaenda.+ 23 Asi pavaifamba, akabatwa nehope. Dutu rine simba kwazvo rakabva ratanga vari mugungwa, uye chikepe chavo chakanga chava kuzara mvura, chava kuda kuparara.+ 24 Saka vakaenda kwaari, vakamumutsa vachiti: “Murayiridzi, Murayiridzi, tava kufa!” Iye akabva amuka, akatsiura mhepo yacho nemvura yacho yaiva nehasha, zvikanyarara, kukabva kwadzikama.+ 25 Akabva ati kwavari: “Kutenda kwenyu kuripi?” Asi ivo vakanga vava kutya, vachishamisika, uye vaitaurirana vachiti: “Munhu uyu anombova ani anoudza mhepo nemvura zvekuita, zvomuteerera?”+ 26 Vakasvika kumhenderekedzo munharaunda yevaGerasa,+ iri kune rumwe rutivi rweGungwa reGarireya. 27 Jesu paakabuda muchikepe, mumwe murume wemuguta racho akanga akagarwa nemadhimoni akasangana naye. Akanga ava nenguva achigara asina kupfeka, uye aigara kumakuva* kwete mumba.+ 28 Paakangoona Jesu, akashevedzera, akazviwisira pamberi pake, uye akati nenzwi guru: “Munei neni, Jesu, Mwanakomana waMwari Wekumusorosoro? Ndinokumbira kuti musandirwadzisawo.”+ 29 (Nekuti Jesu aiudza mweya wacho usina kuchena kuti ubude mumurume wacho. Wakanga wamubata kakawanda,*+ uye aigara achisungwa necheni nezvisungo zvemumakumbo, achichengetedzwa, asi aidambura zvisungo zvacho obva aendeswa nedhimoni racho kunzvimbo dzisina vanhu.) 30 Jesu akamubvunza kuti: “Unonzi ani?” Iye akati: “Rigiyoni,” nekuti akanga akagarwa nemadhimoni akawanda. 31 Uye aimuteterera kuti asaarayira kuenda mugomba rakadzikadzika.+ 32 Paiva nenguruve dzakawanda+ dzaifudzwa mugomo imomo, saka akamuteterera kuti aabvumire kupinda madziri uye akaabvumira.+ 33 Madhimoni acho akabva abuda mumurume wacho, akapinda munguruve, dzikamhanya nepamawere dzichipinda mugungwa, dzikanyura. 34 Asi vafudzi pavakaona zvakanga zvaitika, vakatiza, vakanozvitaura muguta nemumamisha. 35 Vanhu vakabva vabuda kunoona zvakanga zvaitika. Vakauya kuna Jesu, vakawana murume wacho akanga abuda madhimoni, akapfeka, ava munhu kwaye, akagara pedyo naJesu, uye vakatya. 36 Vaya vakanga vazviona vakavaudza kuti munhu uya aimbova nemadhimoni akanga aporeswa sei. 37 Vanhu vakawanda vemunharaunda yevaGerasa vakakumbira Jesu kuti abve kwavari, nekuti vakanga vava kutya zvikuru. Saka akabva akwira muchikepe kuti aende. 38 Asi murume uya akanga abuda madhimoni akaramba achimukumbira kuti arambe ainaye, asi akaudza murume wacho kuti aende, achiti kwaari:+ 39 “Dzokera kumba, urambe uchiudza vamwe zvawaitirwa naMwari.” Saka akaenda achizivisa muguta rese zvaakanga aitirwa naJesu. 40 Jesu paakadzoka, vanhu vakamutambira zvakanaka, nekuti vese vakanga vachimutarisira.+ 41 Asi pakabva pasvika mumwe murume ainzi Jairosi; murume uyu aiva mukuru aitungamirira sinagogi. Uye akawira patsoka dzaJesu, akatanga kumuteterera kuti aende naye kumba kwake,+ 42 nekuti mwanasikana wake mumwe chete,* uyo aiva nemakore angasvika 12, akanga ava kuda kufa. Jesu paaifamba achienda, vanhu vaisundidzirana paari. 43 Paiva nemumwe mukadzi akanga ava nemakore 12 achibuda ropa,+ uye aishaya munhu angakwanisa kumurapa.+ 44 Akauya nechekumashure ndokubata masa* enguo yake yekunze,+ uye ropa rake rikabva rangomira kubuda. 45 Saka Jesu akati: “Ndiani andibata?” Vese pavairamba, Petro akabva ati: “Murayiridzi, vanhu vakakumomoterai uye vari kusundidzirana pamuri.”+ 46 Asi Jesu akati: “Pane munhu andibata, nekuti ndinoziva kuti simba+ rabuda mandiri.” 47 Paakaona kuti akanga azivikanwa, mukadzi wacho akauya achidedera, ndokuzviwisira pamberi pake, akataura pamberi pevanhu vese kuti akanga amubatirei uye kuporeswa kwaakanga aitwa pakarepo. 48 Asi iye akati kwaari: “Mwanasikana, kutenda kwako kwakuporesa. Enda zvako nerugare.”+ 49 Achiri kutaura kudaro, mumwe mumiririri wemukuru aitungamirira sinagogi akasvika achiti: “Mwanasikana wenyu afa; chiregai henyu kunetsa Mudzidzisi.”+ 50 Jesu paakazvinzwa akamuudza kuti: “Usatya hako, ingova nekutenda chete, uye achaponeswa.”+ 51 Paakasvika pamba pacho, akarambidza vamwe vese kupinda, kunze kwaPetro, Johani, Jakobho, nababa naamai vemusikana wacho. 52 Asi vanhu vese vaichema vachizvirova neshungu. Saka akati: “Musachema,+ nekuti haana kufa asi akarara.”+ 53 Vakabva vatanga kumuseka zvekutsvinya, nekuti vaiziva kuti akanga afa. 54 Asi iye akamubata ruoko akamushevedza achiti: “Mwanangu, muka!”+ 55 Simba rake reupenyu+ rakadzoka,* akabva asimuka pakarepo,+ uye akataura kuti vamupe chekudya. 56 Vabereki vake vakanga vasingachabatiki nekufara, asi akavarayira kuti vasatomboudza munhu zvakanga zvaitika.+
^ Dzimwe shanduro dzinoti, “Wakanga wava nenguva refu wakamubata.”
^ Kana kuti “Mweya wake wakadzoka.” Shoko racho rechiGiriki nderekuti pneuʹma. Ona Tsanangudzo Yemashoko.